How to compare two files with Notepad ++ ? | နည်းပညာပျိုးခင်း
HomeHow to compare two files with Notepad ++ ?
How to compare two files with Notepad ++ ?
August 11, 2017 September 6, 2017 Phyo Lwin Tips and Tricks
ဒီနေ့ ဖိုင် ၂ ခု ကို မတူတာ ဘာရှိလဲ စစ်စရာရှိတဲ့အတွက် ဘာနဲ့စစ်လို့ရမလဲ လိုက်ရှာကြည့်မိတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဆော့ဝဲတစ်ခုသုံးပြီး စစ်ကြည့်ဖူးတယ်။ နာမည်ကို စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ လိုက်ရှိကြည့်လိုက်တော့ notepad ++ နဲ့လဲ စစ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ အဲလိုစစ်လို့ရအောင် နည်းနည်းတော့ ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်။
64 bits နဲ့ဆိုရင် အဆင်မပြေဘူး။ 32 bits မှာပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ 32 လား 64 လား ပြောမထားဘူး။ အဲဒီဖိုင်ကို 64 bits နဲ့ အင်စတောလုပ်ထားတဲ့စက်မှာ ထည့်ကြည့်တော့ 32 bits ဖိုင်က support မလုပ်ဖူးပဲပြောတယ်။
အရင်ဆုံး 32 bits installer ကို အင်စတောလုပ်၊ ပြီးရင် pluging ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို extract လုပ်ပြီးတော့ C:\_Program Files (x86)\_Notepad++\_plugins ဖိုဒါအောက်မှာ ထားလိုက်ပြီးတော့ notepad ++ ကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် plugins menu အောက်မှာ compare ဆိုတာလေးကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါပြီးရင် compare လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင် ၂ ခုကို ဖွင့်ပြီးတော့ Plugins >> Compare >> Compare ကို ကလစ်လိုက်ရင် မတူတာတွေကို အရောင်လေးတွေနဲ့ ပြပါလိမ့်မယ်။
← Cisco WLC and AP upgrade
Tacacs with CPPM and Palo Alto →